1. Afangaro anaty vilia jobo ny atody rehetra sy ny siramamy. Arotsaka koa ny lafarinina sy ny leviora avy eo, ka rehefa mifangaro tsara dia arotsaka indray ny liqueur miaraka amin’ilay dibera efa natsonika mialoha.
2. Raha manana lasitra vita amin’ny « silicone » dia arotsaka ao avy hatrany ny paty. Raha lasitra vy kosa dia hosorana dibera aloha vao fenoina ireo lasitra rehetra.
3. Avela haka aina kely mandritra ny fahefak’adiny vao ampidirina ao anaty lafaoro mandritra ny 10 mn, amin’ny hafanana 210°
Torohevitra: Azo atao ny manolo ny fangaro ao anatin’ny Madeleine araka izay hitiavana azy. Soloina sôkôla na raisin secs na fruits secs